Baby yakakwirira cheya
Baby chengetedzo motokari chigaro
nei sarudza nesu?
Tiri akazvitsaurira mwana mukuru cheya
Manufacturing nokutengesa Tine zvikuru nounyanzvi gungano mutsetse, yepamusoro mushure-okutengesa basa chikwata, uye zvikuru akakwana mutengo. Support chitoro uye OEM.
logistics uye kutakura.?
tine zvakakwana kupembedza zvinhu zvakaisvonaka chigadzirwa customization okufunga. Tinogona kununura nhumbi mukati memazuva 15 kusvika 30. Small batch mangé zvinogona achaiswa pasuo renyu mumazuva 15.
NO.52, Zhengtong road, cixi guta, Zhejiang dunhu, China.315303